फेसबुकमा लेख्न नहुने ९ वटा कुरा के-के हुन् ? हेर्नुहोस - नागरिक रैबार::Nagarikraibar.com फेसबुकमा लेख्न नहुने ९ वटा कुरा के-के हुन् ? हेर्नुहोस - नागरिक रैबार
फेसबुकमा लेख्न नहुने ९ वटा कुरा के-के हुन् ? हेर्नुहोस
एजेन्सी। क्याम्ब्रिज एनालिटिक प्रकरणले मानिसको दैनिक जीवनमा फेसबुकले खेल्ने भूमिकामाथि प्रश्न गर्यो। त्यसैका आधारमा मानिसहरुले आफ्नो फेसबुक खाता नै बन्द गर्न समेत तयार भए। फेसबुक बन्द गरिहाल्नुपर्छ त ? पर्दैन। आफ्नो एकाउन्टलाई सुरक्षित भने राख्नै पर्छ। गोपनीय वस्तुहरु फेसबुकमा राखेका छौं भने त्यसलाई हटाउँदा यो सामाजिक सञ्जाल थप सुरक्षित हुन सक्छ।
जन्मदिन धेरै हिसाबले सुचनाको भरपर्दो स्रोत हो। तपाईँको जन्म मितिसँगै तपाईँको नाम र ठेगाना पनि यसमा रहन्छ। त्यही सूचनाका आधारमा मानिसहरुले तपाईँको बैंक खातासम्म आफ्नो पहुँच पुर्७३हद्दण्ण्मसयाउन सक्छ। व्यक्तिगत विवरणले उनीहरुले गर्न चाहने कुकृत्य पूरा हुनसक्छ।
माेवाइल नम्बर तपाईँले फेसबुकमा राख्नु पनि जोखिमपूर्ण नै हुन्छ। तपाईँले फेसबुकमा आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुभएको छ भने त्यसलाई हटाउँदा तपाईँलाई हानी हुने सम्भावना केही न्यून हुन्छ।
अक्सफोर्डका मनोविज्ञानका प्राध्यापक रोविन डोनबरको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने मानिसले १ सय ५० जनामात्र स्थिर मित्र बनाउन सक्छ। ३ हजार ३ सय ७३ फेसबुकका प्रयोगकर्तामाथि अध्ययनपछि डोनबरले निचोड निकालेका छन् – फेसबुक फ्रेन्डमध्ये थोरैमात्र विश्वास गर्न सकिने हुन्छन्, धेरैजसो ‘इमोसनल क्राइसिस’मा प्रतिक्रिया दिनेमात्रै हुन्छन्। धेरैभन्दा थोरै तर अन्तर्क्िरया भइरहने साथी फेसबुकमा जोडिनुपर्ने उनको तर्क छ।
अक्सफोर्ड इन्टरनेट इन्स्टिच्युटका भोक्टोरिया नासाले हालै एउटा सबाल उठाएका छन् स् कस्ता खाले सूचना बालबालिकाले अनलाइनमा हेर्न चाहेका छन् या भविष्यमा हेर्ने चाहना राख्छन्? अघिल्लो पुस्ताले उनीहरुको त्यो सोचलाई कहिल्यै वास्ता गर्दैनन् र फोटो अपलोड गर्छन्। परिवारसँगको भए पनि बालबालिकाको दृष्टिकोणविनाका फोटोले जहिले पनि खतरा निम्त्याउन सक्छ।
श्रफेसबुकमा पोस्ट गर्ने क्रममा हामीले आफ्ना परिवारका बालबालिका वा आफ्नै सन्तान कहाँ जाँदैछ भनेर खुलाइरहेका हुन्छौं। स्कुल कुन र कहाँ छ भन्ने पनि खुलाउँछौं। यस्तो सूचनाले बालबालिकामाथि यौन शोषण गर्नेका लागि बाटो खुलिरहेको हुनसक्छ।
पनि सार्वजनिक नगर्नुहोला।
श्रबोर्डिङ पासको फोटो
मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा
फ्यानको नजरमा उत्यौली हुदैँ पार्वती राई
‘अरुको आवाज हामीले सुन्यौँ , हाम्रो आवाज कसले सुन्ने ?’,
काठमाडौं । पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले शुक्रबार राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्नुपर्ने, पेशागत सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने माग गर्दे महासंघले प्रदर्शन गरेको हो । लकडाउनको अवधिमा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई जागिरबाट निकाल्नेलगायतका समस्या देखिएको भन्दै राजधानीको बबरमहलमा प्रदर्शन गरिएको हो । पत्रकारहरुलाई कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण नदिने, जिम्मेवारीविहिन […]
अब सिमकार्ड लिन स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने
काठमाडौं – सिमकार्ड हराएको अथवा बिग्रिएको अवस्थामा नयाँ सिमकार्ड लिनुपर्दा ग्राहकले आफ्नो सक्कली परिचयपत्र लिएर स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सक्कल परिचयपत्र लिएका ग्राहकलाई मात्र सिमकार्ड उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गरेको हो । सक्कल परिचयपत्रसँगै प्रतिलिपि रुजु गरी, ग्राहकले भरेको फाराम चेकजाँच गरेर मात्र सिमकार्ड […]
नागरिक रैबार/बाजुरा २ असार। बाजुरा जिल्लाका समग्र दलित समुदायलाई लक्षित गरेर सामाजिक संजाल (फेसबुक) मार्फत लिखित रुपमा अपशव्द प्रयोग गरि जातीय भेद्भाव गर्ने १ जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा मुद्धा दर्ता गरिएको छ । सोमबार बाजुरा जिल्लाका दलित अगुवा र दलित समुदायका पत्रकारहरुले बुढीगंगा नगरपालिका वडा नं. १० भण्डार गाउँ बाह्रवीसका सत्यराज जोशी विरुद्ध […]
२६ जेठ, विराटनगर । प्रदेश १ मा सोमबार २० जनामा काेराेना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यससँगै प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको संख्या २७७ पुगेको छ । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सुरेश मेहताका अनुसार मोरङका तीन स्थानीय तहमा ९, झापाका तीन स्थानीय तहमा १० र सुनसरीमा १ जनामा संक्रमण देखिएको छ […]